SADC Yokoka Nhengo Dzayo Kuti Dziongorore Sarudzo Dzichaitwa muZimbabwe
Sangano reSADC, ratumira matsamba ekukoka nhengo dzaro dzinoda kuongorora sarudzo dzemuna Kurume.
Vamwe vanoshanda kubazi re Politics, Defense and Security Corporation, vaudza Studio 7 kuti SADC haisati yatanga kuwana mhinduro, asi vati pane mukana wekuti vanoongorora sarudzo vari pasi peSADC, vachati nonokei kuenda kuZimbabwe pane zvanga zvakatarisirwa.
VeSADC Parliamentary Forum vanotiwo havasati vakokwa nehurumende yeZimbabwe kuti vaongorore sarudzo idzi vakazvimirira voga.
Musarudzo dzemuna 2005, sangano iri harina kukokwa. Executive Assistant vesangano iri, Va Roy Ngulube, vati vakamirira kukokwa, asi vati vari kugudzikana nekukokwa kwedzimwe nhengo dzeSADC kuti dziongorore sarudzo idzi.
Mutori wenhau dzeStudio7, Carole Gombakomba, aita hurukuro nasachigaro ve ZESN, VaNoel Kututwa, kuti tinzwe kuti vanotambira sei kukokwa kwenhengo dzeSADC .
Ukuwo hurumende yeBritain inoti iri kushanda zvakasimba kuti dzimwe nyika dzitumire vaongorori vesarudzo kuZimbabwe, kunyange hazvo VaMugabe vakati havasi kuzobvumidza nyika dzavanovenga kutumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe.
Sekutaura kuri kuita Sandra Nyaira ari muLondon, izvi zvakataurwa neChipiri madeko mudare reparamende remuBritain.